MAHAFINY Enstrom 280FX FSX & P3D
Sambany teo amin'ny tantaran'ny Microsoft Flight Simulator no namorona sy namoaka helikoptera Enstrom add-on. Eagle Rotorcraft Simulations (mifanaraka amin'ny Rikoooo) dia reharehany fa mpamorona voalohany hanome ny vondron-piarahamonina simulation sidina ho an'ny Enstrom 280FX avo lenta FSX Haingam-pandeha sy nifanentana Prepar3D v4 +. Ahitana ny endri-javatra FSX modely teratany miaraka amin'ny sarimiaina, madiitra sy sarintany mahazatra, avionika mahazatra sy ny maro hafa.
Ny Enstrom F-28 sy 280 dia fianakaviana ny kely, hazavana piston-engined angidimby vokarin'ny ny Enstrom angidimby Corporation.
Vakio ny boky tafiditra.
Nohavaozina taminy 22 / 08 / 2019: Fifandraisana amin'ny Prepar3D v4. Takelaka 2D / VC vaovao noforonin'i Pierre FASSEAUX. Auto-installer dikan-teny 10.5
Downloads 14 394
Nohavaozina taminy 22-08-2019
Simulator Eagle Rotorcraft, 2D sy VC takelaka nataon'i Pierre FASSEAUX